UZinnbauer ukhala ngendlala yamagoli kwiBucs - Impempe
UZinnbauer ukhala ngendlala yamagoli kwiBucs
Ugcizelele ukuthi akwanele abakwenzile umqeqeshi we-Orlando Pirates uJozef Zinnbauer njengoba behluleke bancama ukuwina bebhekene neTS Galaxy ekhaya ngoLwesibili.
IBucs ibambane neGalaxy ngo 1-1, e-Orlando Stadium, yize ike yahamba phambili ngo 1-0 kulo mdlalo weDStv Premiership. Okunye okukhalisa umqeqeshi ukuthi bawatholile amathuba okushaya amanye amagoli kodwa bangawasebenzisa ngendlela.
“Sishaye igoli emdlalweni kodwa ngevuma kwalokho kwaba nokuhlakazeka okuthile sadedela igoli ngokushesha. Bekungathi sizolishaya elinye kodwa kwangenzeka futhi nangesiwombe sesibili besiwagoba amabhola kodwa lutho igoli. Kithina alanele iphuzi elilodwa njengoba besidlala neGalaxy,” kusho uZinnbauer.
IPirates inomdlalo omkhulu ngempelasonto lapho izobhekana neKaizer Chiefs koweDStv Premiership e-Orlando Stadium, ngoMgqibelo ntambama. Izoya kulo mdlalo ngaphandle kuka-Innocent Maela othole ikhadi eliphuzi lesine bebhekene neGalaxy.
“Sinabo abadlali, sinaso isixazululo. Akufani nokungabi naye umgadli, sikhona isixazululo kule ndawo,” kusho uZinnbauer kafushane.
Ebuzwa ukuthi kumthikameza kanganani ukuhlelela imidlalo njengoba kunabagadli abalimele, uZinnbauer uvumile ukuthi kuthanda ukuba yinkingana.
“Sinabagadli abane abangadlali kodwa ngeke sikushintshe lokho. Kumele sisebenze ngabadlali abasenkundleni. Siyawathola amathuba futhi singakwazi ukuwaqedela sishaye amagoli. Ngeke ngithi asinabo abadlali abangashaya amagoli. Siyayidinga nenhlanhla kodwa kumele sisebenze kanzima. Kumele uzame ejimini ukuzifundisa ukukhahlela,” kusho uZinnbauer.
Lo mqeqeshi uthe kuyamkhathaza ukuthi basashaye amagoli amabili emidlalweni emibili edlule.
“Kuyinkinga kona uma ungawashayi amagoli. Kodwa enye inkinga ukuthi ngesikhathi sibhekene neGalaxy bekuwukuthola izikhala kodwa uma sithola izixazulo zalokho asiwasebenzi amathuba. Kumele sisebenze kukona.”
Njengoba ekhuluma ngokungashayi amagoli nje uZinnbauer akucaci noma uzobe ekhona yini uGabadinho Mhango uma sebebhekene neChiefs ngoMgqibelo.
Previous Previous post: UMotsepe usenikwe imvume yokungenela ukhetho lwesokwengamela iCaf
Next Next post: Uthi isabambe ngakho uKapinga kwiSundowns esiyizwa ngendaba iwini